Darawalkii waday gaarigii dadka shacabka lagu laayay deegaanka Calamada oo gacanta lagu dhigay - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Darawalkii waday gaarigii dadka shacabka lagu laayay deegaanka Calamada oo gacanta lagu dhigay
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inaysan marnaba ka hari doonin ciidamada AMISOM ee dhawaan dad shacab ah ku laayay deegaanka Calamada oo ku taala inta u dhaxeeysa degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha degmada Afgooye C/naasir Caalim Ibraahim ayaa sheegay inay shilkaasi kala hadleen saraakiisha ciidanka AMISOM ee ku sugan gobolka Sh/hoose, iyadoo la qabtay darawalkii AMISOM ee waday gaarigii laayay dadkii shacabka ahaa ee saarnaa baska yar ee deegaanka Calamada.
Askariga darawalka ah ayaa haatan lagu hayaa xabsi ku yaala saldhiga Xalane ee magaalada Muqdisho, waxaana socda baaritaano la xiriirto sidii arrinta shilka loo xalin lahaa.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in AMISOM lagula xisaabtami doono dadkii ku dhintay shilkiii shalay tiradoodu hadda ka badan tahay 10 qof.
Si kastaba ha ahaatee, ciidamada AMISOM ayaa si joogto ah ugu lug yeelatay falal lagu dilay dad shacab ah oo fara badan, iyadoo ay sii kordhayaan tacadiyada ciidamadaasi ay ka geysanayaan gobolka Sh/hoose.